Xildhibaano Cusub oo Lagu Doortay Muqdisho iyo Jowhar • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Xildhibaano Cusub oo Lagu Doortay Muqdisho iyo Jowhar
Xildhibaano Cusub oo Lagu Doortay Muqdisho iyo Jowhar
December 4, 2016 - By: Cumar Mohamed
Xildhibaan Jaylaani Ikar
Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Baarlamanka waqtigiisu dhammaaday, Jeylaani Nuur Iikar ayaa loo doortay xubinimadda aqalka hoose ee Barlamaanka Federaalka, doorasho adag oo ka dhacday magaaladda Muqdisho,
Ikar wuxuu tartan adag la galay murashixii la tartamayay oo lagu magacaabo Cabdicasiis Cismaan Yaroowe, wuxuuna kaga guulaystay 28 cod, Musharaxa la loollamayay oo isna helay 23 cod.
Sidoo kale waxaa iyana doorashooyinkii Beelaha Banaadiriga ee Maanta ka dhacday Magaalada Muqdisho kusoo baxday fahmo Axmed Nuur, oo ina adeerteed Tuuma Cusmaan Nuur kaga guuleysatay dhammaan 51-gii Cod.
Dhinaca kale, Doorashooyinkii Aqalka hoose ee ka dhacday magaaladda jowhar waxaa ku soo baxay Sedex xildhibaan oo ka mid noqon doona Baarlamanka soo socda ee Soomaaliya.
Xubnaha la doortay waxaa ka mid ah Eng: C/qaadir Caraboow Ibraahim oo helay 31 Cod ,Khalliif Cabdi Cumar uu isna ku guuleystay 28 Cod iyo Maxamuud C/raxmaan Beene oo heley 27 Cod.
Gabagabadii, Doorashadda Aqalka hoose ee barlamaanka ayaa habsami leh uga socota magaalooyinka Jowhar, Muqdisho, Cadaado iyo Baydhabo, iyadoo maamulka jubbaland uu noqday maamulkii u horreeyay ee soo dhamaystira xubnaha labada aqalka. Waxaa kaloo la sugayaa in maamulka Puntland uu soo dhamaystiro xubnaha dhiman oo gaaray 16 kursi. waxaa kaloo weli dhiman xubnaha metalaya maamulka Somaliland oo weli la isku khilaafsan yahay xubnaha aqalka sare.